Famakafakana ny sisin'ny Samsung Galaxy S7, ny finday avo lenta tonga lafatra | Androidsis
Izahay dia mamakafaka ny sisin'ny Samsung Galaxy S7, finday tsara indrindra noforonin'ny mpanamboatra Koreana
Samsung Galaxy S6 midika izany ny smartphone an'ny fanovana ho an'ny mpamokatra Koreana. Tao amin'io smartphone io dia afaka nanao Samsung ento izahay fakantsary avo lenta ary fahombiazana tsara amin'ny lafiny rehetra. Izy io dia nanala ireo Galaxy S3, S4, ary S5 farany teo, hanokatra ny làlana ho avy. Ny hany zavatra namela antsika hatsiaka kely dia ny bateria ambany sy ny tsy fisian'ny sasany amin'ireo endri-javatra mahavariana indrindra an'ny Samsung toy ny tsy fanesorana ny slot karatra microSD. Adinony ihany koa ny fanoherana ny rano, saingy ny bateria kely indrindra sy ny tsy fahafahany mampitombo ny fitehirizana anatiny no nahazoana fanakianana kely.
Miaraka amin'ny sisin'ny Samgung Galaxy S7, ilay orinasa Koreana nametraka ny hena rehetra amin'ny nendasina ary nitondra ny tsara indrindra tamin'ny S6 izy hanitsiana ireo teboka ratsy ireo toy ny bateria ambany sy ny tsy fisian'ny rano fanoherana ary ny slot microSD. Ity finday avo lenta amin'ny kinova farany ity dia fitaovana iray izay afaka gaga ny olona amin'ny kalitaon'ny zavatra rehetra ananana amin'ny ankapobeny. Io no finday tsara indrindra finday tsara indrindra eny an-tsena ary amin'izao fotoana izao dia manohana azy ny tarehimarika fivarotany. Ary na dia ny mpanamboatra Koreana aza dia nanafaka tamin'ny fanamaivanana kely ny sosona Touchwiz, iray amin'ireo teboka ratsy amin'ny marika ary amin'ny sisin'ny S7, na dia mbola mavesatra aza izy io dia miseho amin'ny fomba hafa.
1 Ny finday avo lenta tonga lafatra
5.2 Fifantohana voafantina
Ny finday avo lenta tonga lafatra
Miaraka amin'ny finday avo lenta izay manana andiana endri-javatra tena avo lenta, mitarika amin'ny fampiasana be dia be izy io, ary ao amin'ilay bateria nisy azy nihatsara be tamin'ny fanontana teo aloha. Ny efijery mandritra ny adiny 4 sy sasany dia azo tanterahina amin'ny fomba malala-tanana amin'ny fampiasana antonony ary raha tsy dia mampiasa azy io be loatra ny olona, ​​amin'ny fomba fatoriana dia tsikaritra fa manao ny zavatra ny maody doze. Ary raha mampiasa ny terminal amin'ny WhatsApp ianao, tambajotra sosialy, sary vitsivitsy, lalao iray na iray hafa, hahatratra roa andro saika tsy ampoizinao izany. Zava-misy ity izay manome zavatra manokana ho an'ny S7.
Samsung dia tsy te ho lavo na amin'inona na amin'inona ary nampiditra ihany koa microSD hanitatra ireo 32 GB fa mitondra izany amin'ny toerana misy anao. Ny oven ho an'ny mofo dia tsy eo izao mba tsy hitondra ny tsara indrindra amin'ny finday avo lenta finday rehefa misy mpampiasa maro izay mieritreritra tsara ny handefa ny elanelan-tany izay saika hahatratra ny endrika, noho izany dia naniry ny handefa ny tsara indrindra ny mpamokatra Koreana ka misy tsy misy fialan-tsiny amin'ny tsy fahazoana azy.
Io no finday avo lenta tsara indrindra eny an-tsena ary raha afaka miresaka momba izany isika fakan-tsary tena tsaraTsy azontsika atao ny manadino ny farany na ilay efijery izay izao koa no tsara indrindra raha tsy manana fitaovana hafa manakaiky azy. Ao amin'ny famolavolana, raha miandry ny Note 5 izay hampiditra ny kinova sisiny isika, ity sisin'ny S7 ity no manamboatra lalana hahafahantsika zatra ny sisiny miolaka amin'ny faritra avo.
Tsotra fotsiny izany ny modely finday Ilay jerena raha te handefa iray hitondra ny tsara indrindra amin'ny tsena. Toy izany, ary tsy misy fialan-tsiny tsy hahazoana azy raha te hanana ny tsara indrindra amin'ny teknolojia finday izao ny olona.
Ao amin'ny S7, Samsung efa lasa teo amin'ny vera io toy ny fitaovana izay mamokatra ny fahatsapana tsara indrindra ary tena mahazaka. Ity vera ity koa dia manasongadina ny famolavolana ny S7 ary midika izany fa rehefa esorinao hiala ao am-paosinao na ao anaty kitaponao io dia mahasarika haingana ny mason'ny namana na aiza na aiza misy antsika. Smartphone tsara izy ity.
Tena izao sarotra ho antsika ny maka sary an-tsaina izay ho entin'i Samsung miaraka amin'ny Galaxy S8 manodidina ny famolavolana, izay amin'ity fanontana ity dia antenaina hitondra fiovana miharihary. Na dia fantatsika aza fa ny sisiny dia ho endrika manaraka, azo antoka fa fialantsiny tsara indrindra ny tsy fanovana. Ho latsaka aminy ihany ny fitsikerana.
Una asehoy miaraka amin'ny famirapiratan'ny 855 nits mitsoka ara-tsaina izany. Iray amin'ireo lafiny amin'ny finday io izay mamela anao ho very hevitra tanteraka ary rehefa ampitahanao amin'ny fitaovana hafa dia tavela mijery azy ireo toy ny tarehy ratsy ianao. Amin'izao fotoana izao dia ny efijery tsara indrindra eny an-tsena izy ary raha efa eo afovoan'ny bar dia mamokatra vokatra lehibe, amin'ny ambaratonga farany ambony dia mahavariana ny zavatra nataon'i Samsung amin'ity finday ity.
Raha miresaka ny efijery tsara indrindra eny an-tsena isika dia afaka milaza izany koa ny fakantsary no tsara indrindra dieny izao amin'ireo mpifaninana rehetra. Angamba amin'ny fomba maodely an'ny LG G5, dia misy ady hevitra izany, saingy ao anatin'ny tarehin-jiro maivana sy amin'ny vokatry ny tselatra fakantsary no ahitana valiny tsara. Raha mandany fotoana be amin'ny habakabaka misy hazavana kely ianao, dia ny finday avo lenta tonga lafatra ny mahatadidy ireo alina majika miaraka amin'ny namana amin'ity fahavaratra ity.
Ny fakana sary ny Galaxy S7 dia manana accent amin'ny maranitra sy a mifidy amin'ny saturation ny loko, saingy ao amin'ny maody mandeha ho azy izay ahafahantsika mankafy toy ny dwarfs rehefa maka sary haingana, satria eo amin'ny autofocus izay misy ny fakan-tsarimihetsika finday koa. Tsindrio indroa ao an-trano ianao ary tifirinao ny faharoa, maninona no tadiavina bebe kokoa?
Touchwiz Maivana kokoa izy io ary tsikaritra izany. Mbola mavesatra ihany izy io, eny, saingy manakaiky i Samsung hanolotra rindrambaiko iray izay tsy manandrana manalavitra tena be loatra amin'ny Android madio, na dia iray amin'ireo mampiavaka azy indrindra aza izany. Ny fampisehoana an'ity smartphone ity dia mahavariana ary amin'ny karazana asa rehetra dia tsy hamela antsika any anaty tatatra izany, fa amin'ny lafiny hafa, hiara-manidina aminy isika amin'ny karazana asa rehetra.
Fepetra vitsivitsy manazava azy.
Ny Samsung Galaxy S7 nindramiko tamin'i Samsung dia misy sensor Sony IMX298 ary ny CPU dia ny Exynos 8890. Ny angona AIDA64 ho an'ny fakantsary, CPU ary efijery.
Fakan-tsarimihetsika tsara, fakan-tsary tsara ary bateria ahafahantsika mampiasa ireo singa roa ireo hahavitana vanim-potoana tanteraka. Amin'ny fampiasana avo lenta azontsika atao mandany tsara ny andro, noho izany dia finday avo lenta izay saika apetraka amin'ny écran isaky ny mamadika azy amin'ilay fanambarana hoe "Ampiasao aho".
Ny manamarika dia ny fampiasana doze manome azy a fahaleovan-tena lehibe rehefa ao amin'ny fomba torimaso. Ho an'ireo mpampiasa mampiasa ny finday avo lenta amin'ny fotoana voafaritra isan'andro, dia efa fantatr'izy ireo fa ho tonga amin'ny andro lavorary izy ireo.
Izahay ao aoriana a Fakan-tsary 12 MP 1 / 2,5 ″, izay sensor lehibe kokoa noho ny S6. Amin'ny tsy fisian'ny fikajiana kely kokoa dia mampitombo ny piksela. Miaraka amin'ny 1.4 um dia hahazo hazavana 95% bebe kokoa isika, noho izany azontsika atao ny mahatakatra ny antony mahatonga azy amin'ny toe-javatra ambany.
Aperture f / 1.7 hahazoana a 25% bebe kokoa ary autofocus haingam-pandeha miaraka amin'ny Pixel Dual. Ny hafainganam-pandeha autofocus dia tena mahavariana satria avo telo heny noho ny Samsung Galaxy S6 izy io.
Ny sary etsy ambany dia nahena ho 1600 x 900.
Rehefa te hankafy ny fitaovana tsara indrindra hilalaovana atiny multimedia izahay, dia mila ny efijery sy ny fitaovana tsara indrindra izay manao ilay asa. Eto ny Galaxy S7 edge dia mahavariana amin'ny ambaratonga rehetra. Ny lalao video, andian-tantara amin'ny fahitalavitra, sarimihetsika na fijerena YouTube amin'ny alàlan'ity smartphone ity dia saika mihombo.
Araka ny nolazaiko teo aloha, raha mitady ny tsara indrindra eny an-tsena ianao, ho an'ny multimedia ny S7 manome amin'ny teny lehibe kokoa.
Azontsika atao ny miresaka momba ny efijery, fakan-tsary, fampisehoana, famolavolana na andian-toetra tsara hafa. Saingy afaka mijanona miaraka foana isika ny fifandanjana amin'ny iray manontolo hitondra antsika any amin'ny finday avo lenta indrindra nataon'i Samsung hatrizay. Io fifandanjana io dia mamela azy hanjakazaka amin'ny faran'ny terminal izay fantatsika rehetra ary samy manota amin'ny zavatra iray ny tsirairay. Ny sisin'ny S7 koa dia manana ny kileman-toetrany, saingy tsy dia misy dikany izy ireo ary tafiditra ao anatin'ny sasany amin'ny mampiavaka ny filan'ny mpampiasa manokana.
Raha miresaka antsipiriany iray isika apetraho eo ambonin'ilay mofomamy ny ranomandry, ny efijery "eo foana", izay mety ho toa adaladala tamin'ny voalohany, dia lasa singa iray amin'ny terminal izay tsy azontsika atao intsony. Amin'ny tsy tokony hamelezana ny telefaona hahafantarana ny ora dia hamonjy izany amin'ny bateria isika, saika hitovy amin'ilay endri-javatra hananantsika amin'ny fotoana rehetra, miaraka amin'ireo fampandrenesana fanampiny.
Samsung tsy te hamela na inona na inona any aoriana ary fantany fa mila ny tsara indrindra amin'ny zavakanto vitany izy amin'ny famoronana finday avo lenta amin'ny fotoana sarotra indrindra amin'ity tsena ity. Izany no antony nitondrany antsika ny fitaovana tsara indrindra afaka natomboka teny an-tsena. Finday iray izay mety ho tiavin'ny olona iray.
Samsung Galaxy S7 sisiny
Ny fampisehoana tena tsara
Hivoaka vetivety ny S8
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Izahay dia mamakafaka ny sisin'ny Samsung Galaxy S7, finday tsara indrindra noforonin'ny mpanamboatra Koreana
Fampihorohoroana dia hoy izy:
Iriko ny iray, ohatrinona ny vidiny?
Mamaly ny fampihorohoroana
Ho an'ny € 644 dia anananao izao any Amazon. Miarahaba anao!
Ny rehetra momba ny Fallout Shelter, ny lalao video Bethesda izay manavao hatrany hatrany
[APK] Tandremo !! Pokeradar ho an'ny Pokemon Go dia azo alaina ao amin'ny Play Store sy APK